“မ မေ့ အောင်” | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » “မ မေ့ အောင်”	12
“မ မေ့ အောင်”
Posted by aye.kk on Jul 19, 2012 in Creative Writing | 12 comments
ကောင်း ကင် တ ခွင်
တိမ် ဆင် အုံ့ မှိုင်း
ရိုင်း တဲ့ ဆယ့် ကိုး
မျက် ရည် ဖြိုး သည့်
ဆိုး တဲ့ အ ဖြစ်
မ မေ့ ပစ် နှင့်
ချစ် သည့် ဇာ နည် ပြည် သူ့ အ တွက်
အ သက် ပေး ဆပ် လွတ် လပ် ဖို့ ရေး ရ ယူ ပေး သည်
ကျေး ဇူး ဂုဏ် အင်
များ စွာ ပင် တည့်
နှိုင်း ယှဉ် အ ထူး
ကိုး ဦး ဇာ နည်
အ တွက် ရည် သန် ပြည် သူ အ များ ပြု ထား စု စု
ကောင်း မှု ကု သိုလ် ဟု မှန် သ မျှ
အ ဖို့ ဘာ ဂ ပေး ဝေ မျှ ၍
သည် လ သည် ရက်
ပြု လျက် အ စဉ် နောင် တွင် သား ကောင်း မ မေ့ အောင်။။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: အန်တီအေးရေ့….
aye.kk says: ကျေးဇူးပါဗိုက်ဗိုက်ရေ။
မဂွတ် ထော် says: ဘယ်လိုလုပ်မေ့မှာလဲဗျာ
aye.kk says: တတ်နိုင်ကြသူတွေ..
သာဓုခေါ်နိုင်စေဘို့ အတွက်၊ကဗျာလေးရေးဖွဲ့ မိလိုက်တာပါ။
TTNU says: မမေ့အောင်သတိပေးသော မအေးကေရေ..
သတိတရ ပေးပို့ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
snow white says: မမေ့အပ်ပါဘူး ဒီရက် လေးကို July 19 မမေ့ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမမေ့ပါဘူး။။။
မောင်ပေ says: ရေချိုးပြီးတော့ ဘုရားရှိခိုးအပြီးမှာ
မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ဗျို့ 
သားဦးမြေးဦး၊ ၀မ်းတွင်းရူး says: မမေ့ရအောင် လူငယ်တွေပိုပြီးတန်ဖိုးထားသိတတ်အောင်
ကျနော်တို့ ကတတ်နိုင်သရွေ့ ဝေငှ ဖလှယ်ကြရမှာပါ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အမအေး ခင်ဗျာ ..
ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဟု ..
ဦးထိပ်မှာ ပန်ဆင်ပြုရင်း ..
pooch says: ဒီနေ့ အိမ်ရှေဝရံတာမှာ အလံကို တိုင်တ၀က်လွှင့်ပြီး ၀မ်းနည်းကြောင်း အထိမ်းအမှတ်ပြခဲ့ပါတယ် အန်တီအေးရေ ။ မျှော်နေခဲ့တဲ့ လွမ်းဥသြသံကတော့ မကြားလိုက်ရဘူး။
aye.kk says: TTNU,
အာဏာရှင်တွေကိုတော့ရွံ့ မုန်းလွန်းလို့ နှလုံးနာလှမိပါတယ်ကွယ်။။
တိ်ု့ တွေရဲ့ …..
marblecommet says: ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း
Comments By Postရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - kyeemite - chitလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - မွေ့ကေသာ - TNAသို့ ချစ်သောဖေဖေ - ခရီးသည်ကြီး - ဦးကြောင်ကြီးသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - ခင် ခ - အလင်း ဆက်ကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - kyeemite - ရွှေတိုက်စိုးစက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - ဆူး - ဦးကြောင်ကြီးဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - TNA - ကြည်ဆောင်းအတ္တဆန် - kyeemite - ခရီးသည်ကြီးအဟံ ပထမံ - TNA - ဆူးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - ဦးကြောင်ကြီးPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - kyeemite - အောင်ကြူးမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ဦးကြောင်ကြီး - Miss Crystalline``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - ဦးကြောင်ကြီး - TheWinner GetprizeCongress - Ei Kyipyar - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလူပါး ပုလင်းထိ - ဆူး - ဆူးနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Ei Kyipyar - amatminကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - kyeemite - အလင်း ဆက်ကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - ဆူးအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးယုံလား? - ဦးကြောင်ကြီး - ဦးဦးပါလေရာအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - kyeemite - padonmarငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - အလင်း ဆက် - padauk moeမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - အလင်း ဆက် - မောင် ပေမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - padonmar - black chawEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77847 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67215 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66706 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58449 Kyats )MaMa (57767 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...